IKhabhinethi yaseBerkshires eWoods enembonakalo yeentaba
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguMike
Xa iyi-78 Mbps, iqela lakho lonke lingafowuna ngevidiyo lize libukele iividiyo kwi-intanethi.
Induli yabucala yaseBerkshires ikhabhathi yomsedare ebekwe phakathi kwamaplanga amahle. Phumla ngeembono eziphefumlayo zeentaba ezivela kwiibhalkhoni ezibukekayo ezimbini. Hlanganani kwiveranda epholileyo evaliweyo ukuze nifumane ukutya. Zizonwabele ngee-s’mores emlilweni ebusuku ngombono ongathintelwanga weenkwenkwezi. Yonwabela ukondla ngaphandle, ukupheka ekhitshini elivulekileyo okanye ujonge ukuya eGreat Barrington kwisidlo sangokuhlwa. Le yindawo efanelekileyo yokuphumla ngoxolo kunye nokuzola kwaye udibanise nendalo, usapho kunye nabahlobo.
Igumbi ngalinye lokulala libandakanya i-fan yebhokisi kwaye kukho i-stand up air conditioner ekhoyo kwigumbi lokulala eliphambili kunye negumbi lokuhlala.
Kulo mhlaba uya kubuliswa zizilwanyana zethu zasehlathini-imivundla, iingcungcu, iiturkeys zasendle kunye nebhere elimnyama ngamaxesha athile. Ebusuku, phulaphula izikhova ezintyilozayo.
Chitha ixesha emoyeni omtsha nangaphandle ukonwabela ukuziva kwe-Berkshires Winter Wonderland. Uya kuba phakathi kwemizuzu engama-20 yokuhamba ngeendlela zokuhamba, ukutyibilika, ukutyibiliza, ukutyibiliza emkhenkceni kunye nokuhamba ngekhephu. Thatha ithuba lokudlala kuJacob's Pillow imizuzu eli-15 kude kunye neTanglewood imizuzu engama-30 kude. Yitya kwiindawo zokutyela ezimnandi kwimizuzu engama-20 kude eGreat Barrington naseLee. Ziphathe kusuku lwe-spa kwiZiko laseKripalu leYoga kunye neMpilo eLenox imizuzu engama-30 kude.
Nje ukuba ubhukishwe siza kukuthumela isikhokelo esibanzi sezinto ekufuneka zenziwe kwindawo ebandakanya iindawo zokutyela ezintle, ukukhwela intaba kunye nokuzonwabisa.
I-wifi ekhawulezayo – i-78 Mbps
Imiswe phakathi kweSandy Brook kunye neFarmington River Valley, iSandisfield yeyona ndawo isemaphandleni kwidolophu yaseNew England, elikhaya kubahlali bexesha elizeleyo abangaphantsi kwe-1000; Ngaphandle kolu kuncipha kwabemi, imida yaseSandisfield ijikeleze ezona khilomitha zininzi zedolophu yaseBerkshire County.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Sandisfield